शिक्षा सुधारको सुरुवाति कदम | Tapaiko Khabar
आज : २०७७ असार २७ गते
शिक्षा सुधारको सुरुवाति कदम
तपाईको खबर संवाददाता प्रकाशित : वैशाख १९, २०७६ विचार
बालबालिकाले कक्षामा पढ्ने सिक्ने कुरामा सबैभन्दा भरपर्दो व्यक्ति शिक्षक हो । केटाकेटीले शिक्षकलाई छाडेर आफ्ना बाबुआमालाई समेत कम आँकलन गर्छन् । तिनले शिक्षकलाई छाडेर अरूलाई पछ्याउँदैनन् । प्रायः शिक्षक वा शिक्षिकाले भनेको भनेर रटान गरिरहन्छन् । शिक्षकले बालबालिकालाई शुद्ध सिकाएनन् भने त्यही अशुद्धलाई तिनले शुद्ध ठम्याइरहेका हुन्छन् । यसर्थ, शिक्षक सक्षम हुनुप¥यो, आफूले पढाउने विषयमा कमजोर हुनुभएन । शिक्षकलाई दक्ष र योग्य बनाउने कुरामा शिक्षक स्वयम्मात्र जिम्मेवार नभई, तिनलाई पढाउने शिक्षण संस्था, तिनलाई प्रशिक्षित गर्ने विद्यालय, क्याम्पस, विश्वविद्यालय र प्रयोगशाला तथा त्यहाँका शिक्षक, प्रशिक्षकको समेत प्रभावकारी सकारात्मक भूमिका हुनुपर्छ ।
एकजना चिकित्सकले एकपटक गल्ती गर्दा एउटा बिरामीलाई असर पर्छ तर एउटा शिक्षकले एकपटक गल्ती गर्दा सयौँ विद्यार्थीमाथि प्रतिकूल प्रभाव पर्छ । हाम्रो बुझाइमा हिजोको शिक्षामा थुप्रै त्रुटि भएरै आज समाजमा विसङ्गति, अराजकता र द्वन्द्व बढिरहेको हो । हामीकहाँ आवश्यक योग्यता र क्षमता नभएका शिक्षक र प्रशिक्षकबाट पढाउने र प्रशिक्षण गराउने कार्य भए शिक्षकको सामान्य त्रुटिले पनि भविष्यमा ठूलो असर पर्छ भन्ने कुरा राज्य स्वयम्ले पनि ख्याल राख्न सकेन । परिणामतः कैयौँ शिक्षकले त राम्रोसँग पढाउन नसकेको मात्र नभएर गलत कुरा समेत पढाएका कुरा सुनिन्छन् । यस्ता कमजोरी एउटा कक्षाकोठामार्फत अर्को पुस्तामा सर्दै जानेक्रमलाई समयमै भङ्ग गरिनु जरुरी छ । सबै शिक्षकले विद्यार्थीलाई आफूले पढेको बुझेको कुरा नै सिकाउने हो । यदि शिक्षकले आफू पढ्दा नै त्रुटिपूर्ण सिकेको छ भने उसले विद्यार्थीलाई पनि त्यही बुझाइ हस्तान्तरण गर्छ । यसैले सही मूल्याङ्कन गर्दा शिक्षकलाई दोष दिनुभन्दा शिक्षक उत्पादन गर्ने संस्था पनि ठूलो दोषी ठहर्छ ।
शिक्षालाई सापेक्ष ढङ्गले प्रभावकारी बनाउन सरकारले राष्ट्रिय प्राथमिकतामा शिक्षालाई पार्नुपर्छ । विद्यालयमा त्रुटिरहित शिक्षा प्रदान गर्न योग्य सीपयुक्त शिक्षक उत्पादन गर्ने विश्वविद्यालयको शिक्षाशास्त्र सङ्कायका साथै शिक्षक प्रशिक्षण संस्थालाई चुस्त र दुरुस्त बनाइनुपर्छ । यस्ता संस्थाबाटै योग्य र दक्ष शिक्षक उत्पादन हुन सक्छन् । अहिलेसम्म यी संस्थाले पनि औपचारिकता निर्वाह गर्ने काममात्र गरिरहेका छन् ।
राम्रो शिक्षकको विद्यार्थीसँग घनिष्ठ सम्बन्ध हुन्छ । विद्यार्थीको पनि शिक्षकसँग राम्रो सम्बन्ध हुनु जरुरी छ । शिक्षकले विद्यार्थीसँग घुलमिल भई भावना बुझी तथ्यगत आधारमा सीप र क्षमताअनुसार अनुसन्धनात्मक कार्यप्रति पनि संलग्न गराउन जरुरी छ । पूर्वी सभ्यताले अनादिकालदेखि नै शिक्षाको उच्चस्थान राख्दै आएको छ । त्यसैले भनिँदै आएको छ– सच्चा गुरुले विद्यार्थीलाई अन्धकारबाट उज्यालोतर्फ डो-याउँछन् । शिक्षकले अँध्यारोबाट उज्यालोतर्फ ल्याउने चिन्तन र मनन गरेर आफूलाई क्रियाशील गराएमा धेरै बालबालिकाको जीवन सफल बन्न सक्छ ।
वैदिककालदेखि आजको वैज्ञानिक युगसम्म आइपुग्दा पनि शिक्षकको मह-व घटेको छैन । शिक्षा नीति कार्यक्रमको वास्तविकता कार्यान्वयन गर्ने स्थानमा शिक्षक नै रहेका छन् । राम्रो शिक्षक समाज, विद्यार्थी र राज्यको नजरमा अहिले पनि सम्मानित नै हुन्छ । देशमा आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्ति निर्माण गर्ने जिम्मेवारी लिएका शिक्षक कर्तव्यच्युत भएमा देश कहिल्यै माथि उठ्न सक्दैन । आफ्नो विषयवस्तुको ज्ञाता र कर्तव्यमा दृढ र विद्यार्थीप्रति जिम्मेवार शिक्षकबाटै देशमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने कार्यमा ठूलो योगदान पुग्छ ।
शिक्षाले सक्षम नागरिक उत्पादन गर्न नसके देशको भविष्य अन्धकारमय हुन्छ । त्यसैले कैयौँ मुलुकले विद्यार्थीलाई कडा मिहिनेतसाथ शिक्षा आर्जन गर्न लगाएका छन् । त्यस्ता मुलुकमध्ये उदाहरणका निम्ति जापान र सङ्घीय गणतन्त्र जर्मनीलाई पनि लिन सकिन्छ । जर्मनीको व्याकरण हाम्रो संस्कृत शिक्षासँग जोडिएको आभास मिल्छ । हामीले अमरकोश घोकेसमान जर्मनीले आफ्नो व्याकरण घोकाउँछन् ।
मानिसमा निहित प्रतिभालाई सीप र जाँगर बढाएर तिनलाई तिखारेर व्यवहारमा ढाल्न निरन्तर अभ्यास आवश्यक पर्छ । विनामिहिनेत सजिलो शिक्षाको पछाडि लाग्ने मानिस खासै सफल भएको पाइँदैन । विद्यार्थीले आफ्नो समय विद्या आर्जनमा लगाउने, ब्रह्मचार्य ग्रहण गर्ने, बढ्दो तडकभडकसँग टाढा रहने, प्राकृतिक वातावरणमा अध्ययन गर्ने आदि हाम्रा गुरुकूल शिक्षाका आदर्श हुन् । अनादिकालदेखिका मान्यता अहिले पनि त्यत्तिकै सत्य र शाश्वत छन् । आज पश्चिमा देशले पनि शिक्षकले भाषण गरेर पढाउनेभन्दा विद्यार्थी स्वयम्ले मिहिनेत गरी खोजतलाससाथ आफ्नो अध्ययनलाई प्रभावकारी तुल्याउनुपर्ने कुरामा जोड दिइरहेका छन् ।
विद्यार्थीको कक्षाकोठा आकर्षक र रोचक हुनु जरुरी छ । उनीहरूको पढाइ र सिकाइमा शिक्षकको गहिरो अभिरुचि हुनुपर्छ । कक्षामा विद्यार्थीका कमजोर पक्षलाई उचाल्ने, होच्याउनुभन्दा तिनका बलियो पक्षलाई चर्चा गराएर हौसला थप्नुपर्छ । कक्षामा कुनै किसिमको भय उब्जने कार्य शिक्षकले गराउनुहुँदैन । उसले बालबालिकालाई कुनै पनि कुरा सिकाउँदा आफू संयमित हुने र सकारात्मक अनुशासन विधि अनुशरण गर्नुपर्छ ।
अझै हाम्रा बालबालिका दण्ड सजायबाट मुक्त हुन सकिरहेका छैनन् । बालबालिकालाई दण्ड सजाय दिने कार्य दक्षिण एसियाली मुलुकमा बढी समस्याका रूपमा विद्यमान छन् । हुन त नेपालमा बालबालिकालाई दण्ड सजायविरुद्ध २०७१ भदौ २८ गतेबाट शारीरिक तथा मानसिक दण्ड सजायविरुद्ध राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गर्दै आए पनि व्यवहारमा खासै सुधार आएको देखिँदैन । अझै बालबालिकाले घरदेखि विद्यालयसम्म धेरैप्रकारका यातना भोग्ने गरेका छन् । कक्षामा शिक्षकले विद्यार्थीलाई रमाइलो, हँसिलो, विनोदप्रिय, प्रसन्न खुलस्त वातावरणमा राखोस् । कक्षामा भयमुक्त वातावरण देखियोस् । यसो हुन सकेमा बालबालिकाको सिकाइमा सुधार आउन सक्छ । सिकाइमा आउने सुधारबाटै विद्यार्थीको व्यवहारमा परिवर्तन आउने हो ।
अहिले प्रायः हाम्रो शैक्षिक कार्यक्रम सिकाइमा सुधारोन्मुख नदेखिएकाले नै औचित्यहीन दिशातर्फ लाग्न थालेको छ । हाम्रो शिक्षाको प्रतिफल सन्तोषजनक नहुनुमा शिक्षा प्रणालीमा कमीकमजोरी हुनुले गर्दा नै हो भन्नेमा दुईमत नहोला । कहाँनेर कसले कति गल्ती गरे भनेर शिक्षक, अभिभावक, सरकार वा राजनीतिज्ञ कुनै एउटा पक्षलाई दोष दिएर कुरा गर्नुभन्दा पनि समग्रतामा आधारित भएर हेर्ने र विश्लेषण गर्ने बानी बसाल्नुपर्छ । सबैले आ–आफ्नो स्थानबाट शिक्षा क्षेत्रमा इमानदारीपूर्वक सहयोग गर्नु नै सुधारको पहिलो कदम हुनेछ ।
यस भन्दा अगाडीकति छ आजको विदेशी मुद्रा विनीमयदर ?
यस पछिनेपालमा बर्ड फ्लू संक्रमणबाट एक युवकको मृत्यु
आधुनिक युगमा आयुर्वेदिक जीवनशैलीको महत्व
शिक्षामा ‘सेमेस्टर सिस्टम’
विकृतिको समाधान हो समाजवाद
हामी सवै बाच्ने आधार नै संकटमा
नेपालमा आरक्षणको आधार नै त्रुटिपूर्ण
सामुदायिक विद्यालयको वास्तविक पाटो
सिन्धुपाल्चोक बाढी अपडेट : दुईको मृत्यु, १४ बेपत्ता
सिन्धुपाल्चोकको बाह्रविसे जम्बु बजारमा आएको बाढीमा परेर दुई जनाको मृत्यु भएको छ...
Copyright © 2019-2020 Tapaiko Khabar | Developed By Sanjeev Barma